Ukuchithwa kokunyusa ukunyuka kwe-welding yepayipi, ukunciphisa ukulungiswa
Ikhaya / izicelo / Ukunyusa ukunyusa Ukutshisa ubushushu
Udidi: Ukunyusa ukunyusa tags: ukutyunjwa ukunyusa ukunyusa, ukucwangcisa ukucima umshini wokulumala, Inkqubo yokufakwa kwentsimbi yangaphambi kwentsimbi, ukutyunjwa komshini wokucoca, unyango lokungeniswa kwangaphambili, preheating welding welding, ukunyusa ulwelo, I-preheating welding induction, umatshini welding welding, PWHT
Iyintoni inqutyoshelweyo yokucima?
Ukuxhoma ukutshisa yinkqubo apho izinto okanye izinto zokusebenza zitshiswa ngokutyalwa ngaphambi kokuqhutyelwa phambili. Izizathu zokutshisa kuqala zihluka. Kwi-cable kunye ne-wire industry, ii-cores ze-cable ziphambi kwexesha ngaphambi kokusatshalaliswa kwe-extrusion. Amashishini athatyulwayo angaphambi kokufudumala ngaphambi kokucoca kunye neengubo zincinci. Ukuxhoma ukucwilisa kwakhona kunciphisa isinyithi ngaphambi kokugoba, kwaye kuyilungisa izibhabhane kunye nemibhobho yokulumala. Isisombululo sokusondeza isisombululo senza ukuba kubekho ukulungiswa kwimihlangano yokuthwala.
I-DAWEI Induction iinkqubo zokutshisa zisebenza ngokugqithiseleyo, ezibangele ukonga kwamandla amakhulu. Xa ukucwangcisa iinqununu zensimbi kunye nentambo kunye nocingo, abahlaziyi be-diode baqinisekisa ukuba amandla ahlale e-0.95, ngaloo ndlela aphelisa iindleko zamandla asebenzayo. Ixesha lokujikeleza lifutshane, nalo. Kwaye ukutshintshana ngokuzenzekelayo kuthetha ukuba ikhoyili enye inokusingatha iindawo ezibanzi zokuvelisa. Iinkqubo zokucima ukuxhoma ziyanqamana kwaye kulula ukudibanisa kwimigca yemveliso ekhoyo okanye ecwangcisiweyo.
Ukuxhoma ukutshisa Uqeshwe kwiimoto, imishini, i-aeronautical, electrotechnical, iimpahla ezimhlophe kunye namashishini wokwakha umkhumbi. Ummandla ophezulu wokusetyenziswa ukulungiswa kwe-welding. I-MYD uchungechunge lwemoya yokupholisa umoya wokutshisa iifom zokufudumala isetyenziselwa kwicandelo le-offshore ukwenzela ukutshisa i-weld. I-MYD uchungechunge lwamaqondo okufudumeza umoya opholisayo abuye aqhutywe kwiiplani zeoli kunye neenqwelo-moya ukuze enze ukulungiswa nokugcinwa.
I-MYD yomoya yokupholisa umoya wokutshisa i-systems yokufudumala isetyenziswe ngokusisiseko ukucima ukutshisa i-weld heat treatment inkqubo.
induction preheating intsimbi ityhubhu welding